The Diplomat ထဲက ဆောင်းပါး ကောက်နှုတ်ချက် ~ Myaylatt Daily.
10:35 PM ဆောင်းပါး No comments
The Diplomat ဆိုတာ နိုင်ငံတကာရေးရာမှာ အင်မတန် သြဇာကြီးတဲ့ ဂျာနယ်တစောင်ပါ။ ဒီဂျာနယ်မှာ ပါတဲ့ "Stop the Suu Kyi Blame Game in Myanmar" (မြန်မာပြည်မှာ ဒေါ်စုကို အပြစ်တင်နေတာ ရပ်သင့်ပြီ) ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးထဲက ကောက်နှုတ်ပြီး မြန်မာပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ စစ်တပ် ထင်သလို အဖြူတွေဟာ လှည့်ချင်သလို လှည့်လို့ရတဲ့ လူအတွေ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ ဒီဆောင်းပါးက သက်သေပါပဲ။
One of the biggest misconceptions laid at the door of Suu Kyi is that she has failed to stop the killings against the Rohingya and other ethnic groups. The NLD government and Suu Kyi do not control the military, nor can they set policy or constraints upon it. To blame Aung San Suu Kyi for human rights abuses committed by the military is therefore deeply disingenuous and ignores this fact completely.
မြန်မာပြန်။ ။ ဒေါ်စုကို အကြီးကျယ်ဆုံး အထင်လွဲမှုကတော့ ရိုဟင်ဂျာနဲ့ အခြားမျိုးနွယ်စုတွေကို သတ်ဖြတ်တဲ့ ကိစ္စကို မတားဆီးခဲ့ဘူး ဆိုတဲ့ အချက်ပါ။ NLD အစိုးရနဲ့ ဒေါ်စုက စစ်တပ်ကို မထိန်းချုပ်နိုင်ပါ။ စစ်တပ်လိုက်နာဖို့ မူဝါဒတွေ၊ ကန့်သတ်ချက်တွေကိုလဲ ချမှတ်နိုင်ခြင်း မရှိပါ။ စစ်တပ်က ကျူးလွန်တဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်မှုတွေအတွက် ဒေါ်စုကို အပြစ်တင်တာဟာ ကိုယ်မသိတာကို ရမ်းပြောရာ ရောက်ပါတယ်၊ ဒီ အခြေအနေမှန်ကိုလဲ လုံးဝ လျစ်လျူရှုရာ ရောက်ပါတယ်။
The second argument is that, even if she does not exercise control, Suu Kyi hasaresponsibility as the head of the government andahuman rights icon to speak out strongly and condemn the atrocities, which undeniably are taking place. Inarecent interview, Suu Kyi was quick to state that she did not agree with the terror tactics that the military was using. However, she was still criticized for failing to accept that ethnic cleansing and mass human rights abuses were taking place. Again, context is important here. Suu Kyi did not deny that atrocities were being carried out, but did not, or more accurately, could not go further with her statement in actively condemning the military and recognizing the Rohingya.
မြန်မာပြန်။ ။ ဒုတိယ ဝေဖန်ချက်ကတော့ ဒေါ်စုအနေနဲ့ ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်း မရှိရင်တောင် အစိုးရခေါင်းဆောင်အနေနဲ့၊ လူ့အခွင့်အရေး အိုင်ကွန်ကြီး အနေနဲ့ တကယ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကို မာမာတင်းတင်း ထုတ်ပြောပြီး ပြစ်တင် ရှုံ့ချသင့်တယ် ဆိုတဲ့ အချက်ပါ။ မကြာသေးမီက အင်တာဗျူး တခုမှာ စစ်တပ်က သုံးနေတဲ့ အကြမ်းဖက် နည်းဗျူဟာကို သဘောတူညီမှု မရှိကြောင်း ဒေါ်စုက ချက်ချင်း ထုတ်ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူမျိုးသုဉ်း သတ်ဖြတ်မှုနဲ့ အစုလိုက် အပြုံလိုက် လူ့အခွင့်အရေး ချုိးဖေါက်မှုတွေ ဖြစ်နေတာကို လက်မခံတဲ့အတွက် သူမကို ဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီနေရာမှာလဲ အခြေအနေ အချိန်အခါက အရေးကြီးပါတယ်။ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေ ဖြစ်နေတာကို ဒေါ်စုက မငြင်းပါ၊ ဒါပေမယ့် စစ်တပ်ကို ပြတ်ပြတ်သားသား ရှုံ့ချဖို့၊ ရိုဟင်ဂျာကို အသိအမှတ်ပြုဖို့တော့ မပြောခဲ့ပါ၊ (အတိအကျ ဆိုရရင်) မပြောနိုင်ခဲ့ပါ။
Power in Myanmar, relinquished partially by the military after 50 years of devastating, iron-fisted rule, has come ataprice. It is understood by many close to her inner-circle of advisers, as well as the diplomatic community, that if Suu Kyi were to speak out more strongly and condemn the military, her government – and Myanmar’s embryonic democracy – would be cast aside. The price of partial power is silence on issues relating to military conduct and affairs. The military needs Suu Kyi to open up the economy and encourage investment after the economy was cut off from the world during the previous half century. On the other side of the balancing scale, Suu Kyi and the NLD need the military to allow them to govern, so that they can slowly unpick the endless caseload of problems that Myanmar faces – from education to energy to infrastructure – and slowly and gradually encourage the military to give up further powers and move toafully civilian government – which it certainly is not at present.
မြန်မာပြန်။ ။ အနှစ် (၅၀)လောက် (တိုင်းပြည်ကို) ပြိုကျပျက်စီးစေခဲ့တဲ့ သံမဏိ အုပ်ချုပ်ရေးအလွန်မှာ စစ်တပ်က စွန့်လွှတ်လိုက်တဲံ တစိပ်တပိုင်းအာဏာကို အလကား ရခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒေါ်စုသာ ဒီထက်ပိုပြီး တင်းတင်းမာမာ ဖွင့်ဟပြောမယ်၊ စစ်တပ်ကို ရှုံ့ချမယ် ဆိုရင် သူမရဲ့ အစိုးရနဲ့တကွ သန္ဓေတည်စ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီတို့ဖယ်ရှားခံရမယ် ဆိုတာ သူမရဲ့ အတွင်းစည်း အကြံပေးတွေနဲ့ နီးစပ်သူများစွာ ကရော၊ သံတမန် အသိုင်းအဝိုင်းကပါ နားလည်ကြပါတယ်။ တစိတ်တပိုင်း အာဏာရဖို့ ပေးဆပ်ရတဲ့ တန်ဖိုးကတော့ စစ်တပ်ရဲ့ အပြုအမူနဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တိတ်တိတ် နေရတာပါပဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာစုနှစ် တဝက်ကာလအတွင်း မြန်မာ့ စီးပွားရေးက ကမ္ဘာကြီးနဲ့ ကင်းကွာနေခဲ့ပြီးတဲ့နောက် စီးပွားရေး တံခါး ဖွင့်ဖို့၊ နောက် ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုတွေကို အားပေးဖို့ စစ်တပ်က ဒေါ်စုကို လိုအပ်ပါတယ်။ ချိန်ခွင်လျှာရဲ့ အခြားတဖက်မှာလဲ ဒေါ်စုနဲ့ NLD ဟာ တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ခွင့် စစ်တပ်ဆီက ရဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီလို အုပ်ချုပ်ခွင့် ရမှသာ ပညာရေးက အစ၊ စွမ်းအင်က အလယ်၊ အခြေခံအဆောက်အအုံတွေ အဆုံး မြန်မာပြည် ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ မရေမတွက် နိုင်တဲ့ ပြသနာတွေကို တဖြည်းဖြည်း ဖြေရှင်းနိုင်မယ်၊ အရပ်သား အစိုးရ စစ်စစ် ဖြစ်လာအောင် အာဏာတွေ နောက်ထပ် စွန့်လွှတ်ဖို့ စစ်တပ်ကို တဖြည်းဖြည်း နားချနိုင်မယ်။ လောလောဆယ်မှာတော့ အရပ်သားအစိုးရ စစ်စစ်ဆိုတာ မရှိသေးပါဘူး။
It is worth noting that Aung San Suu Kyi and the NLD have only been in power one year. Deep-seated change takes place over many years and will not happen in one day, one week, or one year.
မြန်မာပြန်။ ။ ဒေါ်စုနဲ့ NLD အာဏာ ရလာတာ တနှစ်ပဲ ရှိသေးတယ်ဆိုတာ သတိပြုသင့်ပါတယ်။ တကယ်နက်နဲတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေဆိုတာ နှစ်ပေါင်းများစွာ အချိန်ယူပါတယ်၊ တရက် တလ တနှစ်အတွင်း ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။